အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက် (၆) ချက်… – Messi Club
အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက် (၆) ချက်…
အရပ်ပုလို့ လုံးဝ အားငယ်စရာ မလိုပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာလည်း သူ့အားသာချက်နဲ့သူ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက် (၆) ချက်ကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။
1. အဝတ်အစားမရှားခြင်းအရပ်ပုတော့ အဝတ်အစား မရှားပါဘူး
ဒါကြောင့် ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့ အခါမျိုးမှာ တော်ရုံကလေးအင်္ကျီကို ကောက်စွပ်ပြီး ၀တ်သွားလို့ ရပါတယ်။ ဆိုင်မှာ သွားဝယ်ရင်လည်း အာရှမှာ နေပြီး အရပ်ပုတာ မဆန်းတဲ့အတွက် အင်္ကျီဆိုဒ်တွေက အဆင်သင့်ရှိပါတယ် …။
2. ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါတိုင်း ရှေ့ဆုံးမှာ နေရခြင်း
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့သူတွေဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရှေ့ဆုံးကနေ နေဖို့ ဦးစားပေးခံရပါတယ်၊။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ရှေ့ဆုံးက ထင်းကနဲ ဖြစ်နေတာပေါ့ …။
3. တစ်ခုခုနဲ့ဆောင့်မိလို့ နဖူးသီးတာမျိုး မရှိပါဘူး
အရပ်ပုရတဲ့ အားသာချက်ကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ သေချာတာကတော့ အပေါ်က တန်းတွေ၊ ဘားတွေနဲ့ ခေါင်းကို မတိုက်မိတော့ဘူးပေါ့ …။
အရွယ်အစားကသေးတော့ နေရာအများကြီး မလိုဘူး။ ဒီတော့ အဆောင်တို့ ဘာတို့ငှားမယ်ဆိုရင် တော်ရုံတန်ရုံကျဉ်းလို့ နေမရတဲ့အခန်း ချောင်ချောင်လည်လည် နေလို့ရတယ်၊ ဒါက ၀င်ငွေကို သက်သာစေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အများစု သိပ်မငှားတတ်တဲ့ အခန်းမျိုးဟာ ဈေးသက်သာတတ်လို့ပါပဲ …။
5. အမြဲတမ်းကလေးကဲ့သို့ နုပျိုနေခြင်း
အရပ်ပုတဲ့ လူတွေရဲ့ အားသာချက်က အိုမင်းတဲ့အထိ ခါးမကိုင်းတာပဲ-လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရပ်ပုတော့ အသက်အရွယ်ကို ခန့်မှန်းရခက်ပြီး တစ်ခြားသူများထက် အရွယ်ပိုတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရပ်ပုသူများဟာ ကလေးငယ်လေးတွေလို အရွယ်က နုပျိုနေလေ့ရှိပါတယ် …။
6. ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် စိတ်ကြိုက်စီးနုိုင်ခြင်း
အရပ်ရှည်တဲ့မိန်းကလေးများက သူတို့ရည်းစားထက် အရပ် အရမ်းရှည်သွားမှာ ဆိုးလို့ ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာအရပ်ပုတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကို စိတ်ကြိုက်စီးနိုင်ပါတယ်နော် …။
အရပျပုတဲ့ကောငျမလေးတှရေဲ့ အားသာခကျြ (၆) ခကျြ…
အရပျပုလို့ လုံးဝ အားငယျစရာ မလိုပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရပျပုတဲ့ ကောငျမလေးတှမှောလညျး သူ့အားသာခကျြနဲ့သူ ရှိတတျကွပါတယျ။ အရပျပုတဲ့ ကောငျမလေးတှရေဲ့ အားသာခကျြ (၆) ခကျြကိုအောကျမှာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော …။
1. အဝတျအစားမရှားခွငျးအရပျပုတော့ အဝတျအစား မရှားပါဘူး
ဒါကွောငျ့ ဈေးဝယျထှကျတဲ့ အခါမြိုးမှာ တျောရုံကလေးအင်ျကြီကို ကောကျစှပျပွီး ဝတျသှားလို့ ရပါတယျ။ ဆိုငျမှာ သှားဝယျရငျလညျး အာရှမှာ နပွေီး အရပျပုတာ မဆနျးတဲ့အတှကျ အင်ျကြီဆိုဒျတှကေ အဆငျသငျ့ရှိပါတယျ …။
2. ဓာတျပုံရိုကျတဲ့အခါတိုငျး ရှဆေုံ့းမှာ နရေခွငျး
ဒါကတော့ ရှငျးပါတယျ။ အရပျပုတဲ့သူတှဟော ဓာတျပုံရိုကျတဲ့အခါမြိုးမှာ ရှဆေုံ့းကနေ နဖေို့ ဦးစားပေးခံရပါတယျ၊။ ဓာတျပုံထဲမှာ ရှဆေုံ့းက ထငျးကနဲ ဖွဈနတောပေါ့ …။
3. တဈခုခုနဲ့ဆောငျ့မိလို့ နဖူးသီးတာမြိုး မရှိပါဘူး
အရပျပုရတဲ့ အားသာခကျြကတော့ အံ့မခနျးပါပဲ။ သခြောတာကတော့ အပျေါက တနျးတှေ၊ ဘားတှနေဲ့ ခေါငျးကို မတိုကျမိတော့ဘူးပေါ့ …။
အရှယျအစားကသေးတော့ နရောအမြားကွီး မလိုဘူး။ ဒီတော့ အဆောငျတို့ ဘာတို့ငှားမယျဆိုရငျ တျောရုံတနျရုံကဉျြးလို့ နမေရတဲ့အခနျး ခြောငျခြောငျလညျလညျ နလေို့ရတယျ၊ ဒါက ဝငျငှကေို သကျသာစပေါတယျ။ အကွောငျးကတော့ အမြားစု သိပျမငှားတတျတဲ့ အခနျးမြိုးဟာ ဈေးသကျသာတတျလို့ပါပဲ …။
5. အမွဲတမျးကလေးကဲ့သို့ နုပြိုနခွေငျး
အရပျပုတဲ့ လူတှရေဲ့ အားသာခကျြက အိုမငျးတဲ့အထိ ခါးမကိုငျးတာပဲ-လို့ မှတျသားဖူးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အရပျပုတော့ အသကျအရှယျကို ခနျ့မှနျးရခကျပွီး တဈခွားသူမြားထကျ အရှယျပိုတငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရပျပုသူမြားဟာ ကလေးငယျလေးတှလေို အရှယျက နုပြိုနလေရှေိ့ပါတယျ …။
6. ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျ စိတျကွိုကျစီးနိုငျခွငျး
အရပျရှညျတဲ့မိနျးကလေးမြားက သူတို့ရညျးစားထကျ အရပျ အရမျးရှညျသှားမှာ ဆိုးလို့ ဒုက်ခရောကျနခြေိနျမှာအရပျပုတဲ့ မိနျးကလေးတှကေတော့ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျကို စိတျကွိုကျစီးနိုငျပါတယျနျော …။